Swoop waxay duullimaadyo cusub ku tageysaa Palm Springs ka bilowday Edmonton
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Swoop waxay duullimaadyo cusub ku tageysaa Palm Springs ka bilowday Edmonton
Swoop waxay duullimaadyo cusub ku tageysaa Palm Springs ka bilowday Edmonton.
Ballanqaadka Swoop ee Edmonton waa calaamad cad oo muujinaysa in kalsooni lagu qabo Qorshaha Soo kabashada Alberta. Jidadka cusub ee Kanada oo dhan iyo ilaa Palm Springs waxay furaan fursado xiiso leh dalxiiska iyo ganacsiga.
Lahaanshaha korodhka isku xidhka Kanada oo dhan iyo wixii ka dambeeya iyada oo loo marayo Gegida Caalamiga ah ee Edmonton ayaa muhiim u ah gobolka.
Kobaca shirkadu waxay arki doontaa awooda duulimaadka ee Swoop ee caasimada Alberta inay korodhay 76% marka loo eego heerarkii hore ee masiibada.
Balaadhinta Swoop ee taageeraya abuurista 140 shaqo oo toos ah iyo shaqo joojin ah iyo $120 milyan oo waxqabad dhaqaale ah oo la filayo sanadka 2022.
Maanta, Dheeri, Shirkad diyaaradeed oo qiimo jaban oo Canadian ah, ayaa dib u xaqiijisay ka go'naanshaheeda Gobolka Edmonton iyada oo ku dhawaaqday adeeg cusub oo ay ku tagi doonto hal Maraykan ah iyo siddeed goobood oo gudaha ah oo ka imanaysa saldhigeeda Galbeedka Canadian. Maalgelinta cusub ee shirkaddu samaysay ayaa saaka loo dabaaldegay iyadoo ay barbar socoto daah-furka diyaaradda cusub ee Swoop, taasoo ku duuli doonta magaca #Edmonton.
Kobaca diyaaradda ayaa arki doona DheeriAwoodda duulimaadka ee caasimadda Alberta waxay korodhay 76% marka loo eego heerarkii hore ee masiibada, taageeridda abuurista 140 shaqo oo toos ah iyo shaqo joojin ah iyo $120M oo la filayo oo ah waxqabad dhaqaale oo soo saara sanadka 2022.
"Tani waxay u tahay guul weyn Dheeri Anagoo hoosta ka xarriiqayna sida ay nooga go'an tahay in aan horseedno safarka duulimaadka aadka u hooseeya ee Kanada, waxaanan dib u xaqiijineynaa mowqifkayaga diyaaradeed ee leh meelaha ugu badan ee Edmonton," ayuu yiri Charles Duncan, Madaxweynaha Swoop. "Anagoo si xooggan diiradda u saarayna korriinka iyo Edmonton oo ah lammaaneheena, waxaan sii wadi doonnaa inaan siino dadka safarka ah duulimaadyo badan oo aan joogsi lahayn iyo qiimo jaban annaga oo taageeraya soo kabashada dhaqaalaha safarka iyo dalxiiska Kanada."
Ku darida siddeed meelood oo Kanadiyaanka ah ee jadwalka xagaaga ee Swoop waxay arki doontaa adeeg aan joogsi lahayn Edmonton ilaa Charlottetown, Comox, Halifax, Kelowna, Moncton, Ottawa, Regina iyo Saskatoon.
Swoop waxa ay noqon doontaa qaadihii ugu horeeyay ee ka keena isku xidhka madaarka caalamiga ah ee Edmonton ilaa Charlottetown iyo Moncton jadwalka xagaaga ee diyaaradduna waxa uu sidoo kale arki doonaa soo celinta adeegii London, Ontario.
Laga bilaabo Diisambar 16, joogitaanka Swoop ee xudduudaha ka gudba ayaa ka soo kordhaya Edmonton iyadoo lagu daray adeeg cusub Palm Springs. Adeegga aan joogsiga lahayn ee loo qorsheeyay Palm Springs shaqayn doona laba jeer todobaadkii.
Kelly Adams wuxuu leeyahay,
Nofeembar 15, 2021 at 23: 12
Fadlan iska bixi